Ka transformer USB Drive soo kabsado Files
> Resource > Flash Drive > USB transformer Drive Recovery - ka transformer USB Drive Ladnaansho Files
Sidee ayaan u soo kaban karto, Xogta laga transformer USB Drive?
My kid loola dhaqmo USB aan drive transformer 4GB sida toy ah. Waxay u dhan tuuray oo reerka u sarreeyey, iyo musiibo ka dhacday, waxaa loo jebiyey. Hadda waxaa weli laga garan karaa in aan computer laakiinse waxaan ma furi kartid. Macluumaad hantida waa 0 byte. Waxaan ahay si ka walwalsan tahay sababtoo ah waxaa jira sawiro qiimo badan iyo waraaqaha xafiiska ku jira. Qof qabaa kara fikrad ii inuu dib u helo xog aan? Thanks.
Waxaa la hubaa in aad USB drive transformer kharribmay oo aad awoodin in ay helaan macluumaadka ku yaal noqon doonaa. Runta waxa ay tahay in aad looga baahan yahay si fudud loo gaari karo, sababtoo ah waxaa wali si fiican loo-xiran karo your computer. Halkan waxaan ku talin doonaa barnaamij soo kabashada xogta si aad u soo ceshano xogta ka transformer USB drive: Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac . Qalabkani waxa uu bixiyaa xalka ugu wanaagsan si ay u soo ceshano laga badiyay, tirtiray, formatted ama xataa files dhaawacan oo ay ku jiraan sawirrada, document files, files audio iyo videos ka USB drive transformer. Waayo, kiiska, kaas oo ah "Error akhri" ah, barnaamijkan waa utility kaamil ah.
Download version Ibtilo baarista USB drive transformer si aad ku hubin kartaa in Wondershare Data Recovery runtii caawisaa ama ma.
Qabtaan transformer Recovery USB Drive
Aynu qaadan version Windows sida tusaale. Users Mac fadlan akhriso hagahaan version Mac halkan: hage user Wondershare Data Recovery for Mac.
Tallaabada 1 Select Recovery Mode inay bilow transformer USB Drive Data Recovery
Orod Wondershare Data Recovery on your computer oo waxaad arki doontaa saddex hababka soo kabashada soo bandhigay interface bilowga. Fadlan dooro "lumay Recovery File" in ay sii wadaan.
Fiiro gaar ah: Haddii aad isticmaalayso barnaamijka markii ugu horeysay, barnaamijka wuxuu noqon doonaa "Wizard Mode" si toos ah. Hab waxa uu leeyahay user interface ka duwan. Waxaad u baahan tahay inaad ugu bedesho "Standard Mode" on interface bilowga.
Tallaabada 2 Dooro transformer USB Drive in Raadi Khasaaray Files
Hadda barnaamijka tusi doono oo dhan drives adag ee aad PC, oo ay ku jiraan mid ka mid ah si aad u USB drive transformer. Dooro warqadda drive waxaa ka mid ah oo guji "bilow" si ay u bilaabaan baaritaan ku.
Fiiro Gaar ah: "Enable Deep Scan" waxaa loogu talagalay user Ruuxaan helin uu files lumay in baaritaan caadi ah. Waxay qaadataa waqti dheer.
Tallaabada 3 ceshano Xogta laga transformer USB Drive
Markaas files ee la soo daabici doonaa sida ay qaybaha sawirka kadib, sida aad ka arki kartaa image hoose. Waxaad ka arki kartaa magacyada files si aad u hubiso sida badan files waxaad awoodi doontaa inaad dib u soo ceshano, oo aad ku eegaan kartaa sawirada.
Ka dib markii sixitaanka files aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado, waxaad riixi kartaa "Ladnaansho" iyo sheeg meel of your computer si loo badbaadiyo files soo kabsaday.
Fiiro Gaar ah: Wixii ammaanka file, fadlan ha ka badbaadin files si aad USB drive transformer dib.